Daabacaha Darbiga: Xalka Daabacaadda Jilicsan ee Darbiyada Gudaha ama Dibadda | Martech Zone
Khamiis, Juun 3, 2021 Khamiis, Juun 3, 2021 Douglas Karr
Waxaan haystaa saaxiibkay oo naqshadeeya oo rinjiyaaya darbiyada derbiga oo sameeya shaqo la yaab leh. In kasta oo farshaxannimadani ay tahay maalgashi cajiib ah oo beddeli kara goob shaqo ama goob tafaariiqeed, haddana awoodda loo leeyahay in la naqshadeeyo oo lagu sawiro sawir sax ah oo ku yaal meel toosan ayaa inta badan loo daayay in la tirtiro rakibidda ama farshaxanka. Teknolojiyad daabacan oo cusub ayaa soo baxday taas oo wax ka beddeli doonta tan, in kasta oo… daabacayaasha derbiga taagan.
Teknolojiyadda daabacaadda tooska ah ee ugu dambaysay ee Daabacaha Darbiga ayaa u oggolaanaysa rinjiyeynta elektiroonigga ah ee faylasha garaafyada dhijitaalka ah ee waaweyn ee sawirrada, farshaxanka, muraayadaha, ama farriimaha qoraalka ku dhowaad meel kasta oo gudaha ama dibedda ah. Mashiinnadooda waxaa loogu talagalay inay ku daabacaan sagxado badan oo ay ka mid yihiin nuurad, nuurad, galaas, bir, leben, shub, vinyl, iyo alwaax.
In ka yar laba sano, Daabacaha Daabacanku wuxuu mar hore mashiinadiisa ka iibiyey in ka badan 40 ganacsi oo ku baahsan Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, iyo Boqortooyada Ingiriiska. Daabacayaasha toosan waxay bixiyaan adeegsi aan tiro lahayn, wax ku ool ah, iyo xiiso leh oo u turjumaya fursado ganacsi oo dhab ah shirkadaha iyo ganacsatada iyagu korsada.
Fiiri sida qaar ka mid ah macaamiisha ay u isticmaalayaan ama u qorsheynayaan inay u adeegsadaan mashiinnada:
Mid ka mid ah shirkadihii dhowaa ee shirkadda Florida, MiArte oo ku sugan Naples FL, ka dib markii ay daabaceen sawirkoodii ugu horreeyay ee 5'x 8 'isla markaana ay sawirro ku dhejiyeen Facebook wuxuu yiri, "Waxaan la yaabnay jawaabta. waxay u egtahay in dadku sugayeen fursadan. ” Hal macaamil ayaa kajawaabay oo qandaraas lasiiyay Daabacaha Darbiga si uu ugu daabaco labo 8 'muraayadaha muraayadaha ah sabarka, ka dibna la geliyay saqafka, sameynta mural u eg cajalad.
Waaxda isboortiga ee ugu sareysa Jaamacadda D1 waxay raadineysaa inay soo iibsato Mashiinka TWP si loogu isticmaalo bandhigyada kubbadda cagta, kubbadda koleyga, iyo goobaha kale ee isboortiga iyo dhacdooyinka, iyo darbiyada dhismooyinka isboortiga, kahor kulamada waaweyn ee guryaha.
Qurxinta gudaha waxay soo iibsadeen mashiinada si ay uga caawiyaan isku darka muujinta hiwaayadaha shaqsiyadeed ee ay leeyihiin ama baahiyaha farshaxanka darbiga ee deganaanshaha iyo ganacsiga iyo goobaha shaqada.
Sheekada Daabacaha Darbiga
Maaddaama ganacsade taxane ah Paul Baron uu raadinayey waxa xiga ee weyn, wuxuu la kulmay fikrad cusub: daabacaad toosan. Waxay ahayd fikrad ku cusub Ameerika laakiin caan ku ahayd sannado badan Aasiya, Hindiya, Bariga Dhexe, iyo Yurub. Fikradda ah rinjiyeynta muraayadaha gudaha iyo dibedda oo jaban oo loogu talagalay farshaxanleyda iyo milkiileyaasha dhismaha ayaa isaga ka codsaday. Si aad ugu daabacdo darbiyada shey kasta oo dusha sare ah, si la isku halleyn karo oo sax ah, ayaa isaga laga codsaday.
Ka dib markii uu si adag u eegay shirkadaha yar ee soo bandhigaya tikniyoolajiyaddan cusub, 2019 Paul wuxuu heshiis la galay shirkadda ugu da'da weyn uguna horreeya ee Aasiya. Wuu doortay iyaga, ayuu yidhi, maxaa yeelay qiimaha iyo qiimaha dhibicdu waxay si fiican isugu dhafan yihiin tayada naqshadeynta iyo isu imaatinka, iyo taageeridda si loo awoodo in la cabbiro si loo daboolo baahiyaha suuqyada Waqooyiga & Koonfurta Ameerika.
Tan iyo markaas shirkaddu waxay ku iibisay qaybinta in ka badan 20 suuq oo waxay gacan ka geysatay abuuritaanka ganacsiyo cusub oo ku baahsan dhul weynaha Mareykanka iyo Kanada, Koonfurta Ameerika, Boqortooyada Ingiriiska, iyo Puerto Rico. Waxay ku martiqaadayaan macaamiil cusub inay wax ka bartaan Daabacaadda gidaarka iyo fursadda ganacsi ee ku habboon ee ay mataleyso.
Daabacaha Darbiga ayaa ku sii fidi doona dhammaan Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Boqortooyada Midowday, iyo Kariibiyaanka si dhakhso leh sannadaha soo socda. Maaddaama ganacsiyada daabacaadda derbigu sii kordhayaan, shirkaddu waxay ku taageeri doontaa xalal la taaban karo, qafisyo, qaybo, adeeg aad u wanaagsan, iyo suuqgeyn si loogu ballaariyo adeegyadooda daabacaadda gidaarka ee guuleysta.
Iyadoo tikniyoolajiyadda ka dambeysa daabacaadda tooska loo adeegsado si caalami ah sannadaha qaarkood haddana waxaa hadda heli kara ganacsiyada ku baahsan Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika.
Paul Baron, Maamulaha Guud ee Daabacaadda Wall USA
Fikradaha cusubi waxay kusii socdaan inay ka soo baxaan Madbacadaha Dareenkooda iyadoo macaamiisha ay ka codsanayaan farshaxanka dhijitaalka ah darbiyada nooc kasta ha ahaadee, gudaha iyo dibaddaba.
Waxbadan Ka Baro Daabacaha Darbiga
Tags: daabacaadda muralmurqahadaabacaha darbigadaabacaad toosandarbiyada derbigadaabacaadda darbiga